अबको केहि दिनमा २५ करोड १८ लाख बराबरको आईपीओ निस्कासन् हुदै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ? - UjyaloNepal
२०७८ बैशाख १५ गते, बुधबार प्रकाशित
अबको केहि दिनमा २५ करोड १८ लाख बराबरको आईपीओ निस्कासन् हुदै, कहिलेसम्म दिने आवेदन ?
काठमाडौं । यही वैशाख १७ गतेदेखि २५ करोड १८ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ आउने भएको छ ।सीईडीबी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि २५ लाख १८ हजार २३० कित्ता आईपीओ बिक्री गर्न लागेको हो । कम्पनीलाई आईपीओ बिक्रीको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत वैशाख २ गते अनुमति दिएको थियो ।
सर्वसाधारणका लागि विक्री गरिने कुल कित्तामध्ये ५० हजार ३६५ कित्ता सेयर कर्मचारीहरुका लागि र १ लाख २५ हजार ९११ कित्ता सेयर सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएर बाँकी २३ लाख ४१ हजार ९५४ कित्ता सार्वजनिक निष्कासन गर्न लागेको हो ।कम्पनीको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सनराइज क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
आईपीओ छिटोमा वैशाख २१ गते र ढिलोमा वैशाख ३१ गतेसम्म विक्रीमा रहने बताइएको छ । उक्त आईपीओमा न्यूनतम १० कित्ता देखि अधिकतम २५ लाख १८ हजार २३० कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ ।
आईपीओ खरिदका लागि विक्री प्रबन्धकसँगै नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण आस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यो पनि पढ्नुहोस् अनलाईन पोर्टल ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ट बिर्सेमा अब समस्या हुनेछैन । सीडीएससीले पोर्टलको पासवर्ड बिर्सेमा लगानीकर्ता स्वयंले रिसेट गर्नसक्ने सुविधा दिन लागेको जानकारी दिएको छ ।
हालसम्म भुलवश पासवर्ड बिर्सेमा रेसेट गर्ने सुविधान थिएन । तर अब आउँदो असारसम्म यो सुविधा ‘मेरो सेयर’ पोर्टलमा प्रदान गरिने सीडीएससीका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार यो सुविधा ल्याउनका लागि अहिले प्राविधिक गृहकार्य भइरहेको छ।
‘त्यसो त अहिले ‘मेरो सयेर’ पोर्टलकै स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘स्तरोन्नतिको काम सकिनेबित्तिकै लगानीकर्तालाई ‘मेरो सेयर’ को पासवर्ड बिर्सेमा आफैँ रिसेट गर्न सक्ने सुविधा दिनेछौँ।’
हालसम्म पासवर्ड बिर्सेको खण्डमा सम्बन्धित कार्यालयमै पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
‘मेरो सेयर’को समस्या समाधान
यसैवीच सीडीएससीले मेरोशेयर भइरहेने समस्या पनि समाधान भएको जनाएको छ । ‘मेरो सेयर’ पोर्टल स्तरोन्नतिको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै क्लिएरीङ्गले यसपछि सबै समस्याहरु दूर हुने जनाएको छ ।
२ साताअघिदेखि ‘मेरो सेयर’ को स्तरोन्नतिको काम शुरू गरेको सीडीएससीले एउटा लेभलको काम सकिएको र स्तरोन्नतिको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ । उक्त काम सकिएपछि हालसम्म देखिने गरेका समस्याहरु नहुने बताइएको छ ।
विशेष गरी आईपीओ भर्ने समय र आईपीओ नतिजा हेर्ने समयमा ‘मेरो शेयर’मा अत्याधिक समस्या आउने गरेको छ ।
दुई सातामा कोरोना संक्रमित सात गुनाले वृद्धि, १३३ जनाको मृत्यु,
भारतमा एकैदिन हजारौँको निधन, शव जलाउन छैन ठाँउ
मनकामना लघुवित्तको आइपीओ बाँडफाँड मिति सार्बजनिक पर्ने सम्भावना कति ?
२०७८ असार २७ गते, आईतवार प्रकाशित उज्यालो नेपाल 0